Atụmatụ efu ime na Copenhagen | Akụkọ Njem
Atụmatụ efu ime na Copenhagen
Maria | | Copenhague, Getaways Europe
Ọ na-amasị anyị niile ịga njem, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịme nke a, anyị nwere ike ịchekwa ego ebe ọ bụ na oge ụfọdụ ihe ụtọ a nwere ike ịdị oke ọnụ: tiketi ụgbọ elu, ọnụnọ ụlọ nkwari akụ, ọnụ ụzọ ebe ndị njem nleta, iri nri, ịzụta ihe ncheta maka ndị enyi na ezinụlọ anyị. .. Ọ dabara nke ọma na ihe fọrọ nke nta niile obodo e nwere free omume na-eme na-enwe njem na-enweghị okodu a euro. Nke a bụ ihe gbasara Copenhagen, na Denmark.
1 N'ehihie ọdịbendị na ihe ngosi nka SMK
2 Ogige Botanical Copenhagen
3 Copenhagen site igwe kwụ otu ebe
4 Egwuregwu na Royal Danish Opera
5 Ememme ọkọchị
6 Gbanwe ndị nche
N'ehihie ọdịbendị na ihe ngosi nka SMK
Ihe ngosi SMK na Copenhagen, nke a makwaara dị ka Statens Museum maka Kunst, bụ ụlọ ngosi ihe nkiri mba Denmark. Ọ bụ ebe akwadoro iji gaa maka ọrụ ya na ụlọ ya. Na mgbakwunye, nnweta bụ n'efu na Wednesde ka ị nwee ike ịnụ ụtọ nchịkọta ya na-adịgide adịgide na-enweghị okpu okpueze.
Ọ dịkwa mma ka anyị nwee ike itinye uche na mmemme ndị ọzọ SMK Museum na-enye anyị. Dabere na oge, ụbọchị ụfọdụ ụlọ ọrụ nka na-aghọ ohere buru ibu maka ihe omume na nnọkọ ndị ọzọ meghere ọha na eze nwere echiche dị egwu nke Copenhagen site na mbara ala ya.
Ọnụ ego tiketi dị ka nke June 2016 bụ 110 DKK. Agbanyeghị, anyị na-akwado ị nweta Kaadị Copenhagen ebe ị nwere ike ịga ebe dị iche iche mmasị ma jiri ụgbọ njem ọha na-enweghị nsogbu gbasara tiketi na ọnụahịa.
Ogige Botanical Copenhagen
N'ịbụ nke dị nso na Rosenborg Palace na Norreport Station, Ogige Botanical Copenhagen nwere ọtụtụ osisi na Denmark. Ubi ya bu ihe kariri umu ahihia 600 na osisi nke sitere na 1806. Ha bu kwa akuku nke Natural History Museum nke Denmark ma ndi Mahadum Copenhagen na-achịkwa ya.
Ogige Botanical dị kemgbe 1870 ma mejupụta hectare 10 nke ejiri maka agụmakwụkwọ ma ọ bụ ebumnuche sayensị, yana ebe izu ike n'oge ọkọchị ma ọ bụ ebe mgbaba n'oge oyi. Ime ya bụ ụlọ mgbagwoju anya nke narị afọ nke iri na iteghete nke ejiri mee ka griin haus na-eto eto site na osisi arctic ruo cacti, succulents ma ọ bụ orchids.
Gagharị n’ubi ahụ, soro ụzọ ndị ahịrị akara. A na-ahazi ogige ọ bụla site na ụdị osisi ma na-agụnye aha na Latin yana Danish. Rybanye na Ogige Botanical Copenhagen bụ n'efu ma nwee ike ịga leta kwa ụbọchị, site na Mee ruo Septemba ma mechie na Mọnde maka afọ ndị ọzọ nke afọ.
Copenhagen site igwe kwụ otu ebe
A na-eme igwe eji mara obodo isi obodo Denmark. Copenhagen nwere okporo ụzọ dị kilomita 350 nke okporo ụzọ dị iche iche dịpụrụ adịpụ site n'okporo ụzọ nkịtị ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ịgagharị n'obodo ahụ ma ọ bụ banye n'ụsọ osimiri, oke ọhịa na ebe nkiri ndị ọzọ dị nso.
Iji mara igwe kwụ otu ebe na Copenhagen, ịkwesighi ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ buru igwe kwụ otu ebe. Naanị were otu ịnyịnya ígwè ọha na-akwụghị ụgwọ na etiti isi obodo enwere ike iji ya site na ịhapụ nkwụnye ego nke euro 3, nke enwetara mgbe ị na-eweghachi ya na ọdụ ọdụ niile n'ime obodo ahụ.
Egwuregwu na Royal Danish Opera
Kwa afọ Royal Danish Opera House na-ahazi egwu egwu na-atọ ụtọ na ụlọ mara mma nke Royal aterlọ ihe nkiri nke onye ama ama ama ama Danish bụ Henning Larsen mere. Ọ dị n'àgwàetiti Holmen, nke jikọtara site na àkwà mmiri na-enye ohere ịnweta igwe, ịnyịnya, ụgbọ ala ma ọ bụ ụkwụ maka Opera.
A makwaara Royal aterlọ ihe nkiri nke Copenhagen maka usoro nlezianya ọ na-ezo n'ime mgbidi ya, nke nwere ọmarịcha mma na ihe ịchọ mma dị egwu. Nwere ike ịhụ ma nụ ọrụ nke Wagner, Shakespeare ma ọ bụ Verdi, n'etiti ndị ọzọ. A na-eme ihe nkiri kwa abalị.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị de akwụkwọ njem na-eduzi na Bekee iji chọpụta akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahụ, Mgbe ị na-agafe ọtụtụ akụkụ ya ma lee anya n'azụ Mpaghara. Na mgbakwunye, ị ga-amata mbara ihu nzuzo dị ebube nke Queen nke Denmark. Nleta ndị a dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla.
Ememme ọkọchị nke a na-ahazi n’ọdụ ụgbọ mmiri nke obodo dị iche iche nke Denmark bụ usoro okpomọkụ zuru oke maka ihe ụtọ na-enweghị isi maka ụda egwu, arụmọrụ nka na ụlọ ọrụ dị mma. Ezigbo echiche ịnụ ụtọ ịnọ na Copenhagen n'ụzọ dị iche ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga ebe ahụ n'oge ezumike ezumike gị.
Gbanwe ndị nche
Ọ bụrụ na ebe ị na-aga bụ Copenhagen, anyị na-adụ gị ọdụ idobe otu ụbọchị ị ga-aga site elekere 12:00 nke ụtụtụ n'ọnụ ụzọ ama eze nke dị na Amalienborg Square. ịnụ ụtọ ihe ngosi efu nke ndị agha nke ndị Royal Royal Guard na-enye kwa ụbọchị. Njem a malitere na Castlọ Rosenborg ma gwụ na Amalienborg Square, ebe ebe obibi nke oge oyi nke ezinụlọ ndị Denmark dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Copenhague » Atụmatụ efu ime na Copenhagen
Katidral nnu ala nke Zipaquirá na Colombia
Obodo kacha mma na Morocco ileta